Mortgage Loan - CHID
မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (သို့) Dealer Agreement ချုပ်ဆိုထား သည့် Construction Company တို့မှ အကောင်အထည်ဖော်တည်ဆောက်သည့် လုံးချင်း/ တိုက်ခန်းများ ကို အရစ်ကျချေးငွေစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
တန်ဖိုးကျပ် (၃၀၀) သိန်းနှင့်အောက်ဖြစ်ပါက လက်ငင်းပေးငွေ (Down payment) ကို တန်ဖိုး၏ (၃၀%)၊ တန်ဖိုးကျပ် (၃၀၀) သိန်းနှင့်အထက်ဖြစ်ပါက လက်ငင်းပေးငွေ (Down Payment) ကို(၅၀%) ပေးသွင်းရ ပါမည်။
လက်ငင်းပေးငွေ (Down Payment) ပေးသွင်းပြီး ကျန်ငွေကို (၇၀%၊ ၅၀%) ကို ချေးငွေကာလ အများဆုံး (၈)နှစ်၊ ဝင်ငွေနှင့်လျော်ညီမှုရှိပါက (၈)နှစ် သက်တမ်းအောက် ထုတ်ချေးနိုင်ပါသည်။
လုံးချင်း/ တိုက်ခန်းဝယ်ယူခွင့်ကို သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ (ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ ၊ စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ) က လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ စနစ်တကျစိစစ်၍ ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဘဏ်ချေးငွေစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူမည့်သူများကို ဌာန၏ ထောက်ခံချက်အရသာ ဘဏ်မှထုတ်ချေးပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဘဏ်တွင်းစာရင်းရှင်စာရင်းဖွင့်လှစ်၍ တိုက်ခန်းတန်ဖိုး၏ (၃၀%၊ ၅၀%) ကို လက်ငင်းပေးငွေ (Down Payment) အဖြစ်ဘဏ်သို့ပေးသွင်းရန်။
တိုက်ခန်းတန်ဖိုး၏ (၁%)ကို ဝန်ဆောင်ခအဖြစ် ပေးသွင်းရန်။
ချေးငွေကာလကို အများဆုံး (၈)နှစ် (သို့) ဝင်ငွေနှင့် လစဉ်ပေးဆပ်ရမည့်ငွေ လျော်ညီပါက (၈)နှစ်အောက် သို့ အဆိုပြုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
ချေးငွေအပေါ်တွင် တစ်နှစ်လျှင် (၁၂%) ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က အတိုးနှုန်းပြင်ဆင် သတ်မှတ်ပါက ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ချေးငွေအရင်း/ အတိုး ပေးဆပ်မှုအစီအစဉ်
ချေးငွေကာလအလိုက် လစဉ်အရစ်ကျ အတိုး/ အရင်းပေးဆပ်ခြင်း (ဥပမာ- ၈နှစ် (၉၆) လ (၉၆) ရစ်) လစဉ်ပေးဆပ်ရမည့်ငွေမှာ အညီအမျှဖြစ်ပြီး၊ လစဉ်ပုံမှန်ပေးဆပ်ပါက ချေးငွေကာလ ကုန်ဆုံးသည့်အခါ အရင်း/ အတိုး ပြေကြေပြီးဖြစ်ပါသည်။
အရင်း/ အတိုး တွက်ချက်ပုံမှာ နိုင်ငံတကာအိမ်ရာချေးငွေတွင် အသုံးပြုသည့် Amortization Method ကို အသုံးပြုတွက်ချက်ပြီး၊ လစဉ်ပေးဆပ်ရန်ကျန်ရှိသည့် အရင်းငွေပေါ်တွင်သာ အတိုးတွက်ချက်ခြင်းဖြစ် သည်။
လစဉ်လဆန်း (၅) ရက်အတွင်း အရစ်ကျပေးဆပ်ငွေကို မပျက်မကွက်ပေးဆပ်ရန်ဖြစ်ပြီး၊ သတ်မှတ်ရက် ကျော်လွန်ပါက တစ်ရက်လျှင် အတိုးနှုန်း (၀..၄%) ကောက်ခံပါမည်။ (၄)ကြိမ် (၄)လ တစ်ဆက်တည်း ပျက်ကွက်ပါက တိုက်ခန်းကို ပြန်လည်သိမ်းယူပါမည်။
ငွေချေးသူ၊ Dealer နှင့်ဘဏ်တို့ (၃)ပွင့်ဆိုင် ချုပ်ဆိုမည့်စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များအတိုင်း အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပါမည်။
ချေးငွေမပြေကြေမီကာလအတွင်း မီးအာမခံအကာအကွယ်ကို နှစ်စဉ်ထားရှိရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကျသင့်ပရီမီယံကို ငွေချေးယူသူက ပေးဆောင်ရပါမည်။
Calculate your monthly mortgage payment using the calculator below. A house is the largest purchase most of us will ever make so it's important to calculate what your mortgage payment will be and how much you can afford. Estimate your monthly payments and see the effect of adding extra payments
No.60,Shwe Dagon Pagoda Road Dagon Township, Yangon.
09-771049627, 01-371254, 01-371348 (Ext-104)
Mon - Fri : 9:00 am - 3:00 pm
Copyright © 2016 CHID BANK by Openmind